Ilhaan Cumar oo sheegtay inay muddaba is-hayeen madaxweyne Donald Trump - BBC News Somali
Ilhaan Cumar oo sheegtay inay muddaba is-hayeen madaxweyne Donald Trump
Image caption Xildhibaan Ilhaan Cumar iyo Madaxweyne Donald Trump
Ilhaan Cumar oo u warramaysay BBC Somali ayaa waxa ay sheegtay in khilaafka kala dhaxeeya Trump uu salka ku hayo khilaafka Trump kala dhaxeeya Muslimiiinta, dadka soo galootiga ah, haweenka iyo dadka madowga ah.
"Halistaas waxaan u malaysanayaa in dadka badanaa ay dareemi karaan in sida madaxweynaha uu u hadlaayo inay keentay." ayey tiri.
"Dadka hadda xabsiga daraadey ugu jira oo rabay inay aniga I dilaan kuligood waxay dhaheen madaxweynaha ayaan taageersannahay oo madaxweynaha magaciisa ayaan rabnaa inaan Ilhaan ku dilno." ayey Ilhaan sii raacisay.
'Trump halis ayuu dad badan galiyay'
Ilhaan waxa ay sheegtay in madaxweyne Trump uusan kaligeed halis galinee uu sidoo kale halis galiyay dadka iyada ay matasho iyadoo tiri: "wuxuu halis galiyay dadka qaxootiga ah ee raba inay waddankan [Mareykanka] soo galaan, halista uu galiyay dadka Muslimiinta, halista uu galiyay dadka madowga ah iyo dumarka sida uu uga hadlo halista ay keenayso."
Waxa ay intaasi ku dartay in Trump uusan ka fakarin dhibka uu hadalkiisa keeni karo "waa qof aanan ka fakarin hadalka uu isticmaalaayo iyo dhibaatooyinka uu keeni karo, iyadoo dadka uu ka dhigayo inay cadaw yihiin oo kale."
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa bartamihii bishii Febraayo waxa uu ugu baaqay Ilhaan Cumar oo ka tirsan Aqalka Kongreska Mareykanka, inay iscasisho, kaddib markii ereyo "Yuhuud naceyb" ah ay ku qortay barteeda Twiter-ka.
Lahaanshaha sawirka MEDIAPUNCH/REX/DAILY MAIL
Image caption Madaxweyne Trump oo ka hadlaya kulan ay lahaayeen Kooxda Hoggaamisa siyaasadda Yuhuudda